Anyị na-na-e bipụtara nnọọ a bit banyere ngwá ọrụ ndị na-kwe ka ahịa na ahịa mgbalị. N'uche m, ndị nnọchi anya ire ahịa nwere ọrụ siri ike karị na-arụ n'oge a. 59% nke oge ha na-arụ ọrụ ndị ọzọ karịa ire ere dịka nyocha akaụntụ na ịdepụta ndu. Ndị ahịa na azụmaahịa nwere ike ịme nyocha pụrụ iche n'ịntanetị, nyochaa atụmatụ, uru, ngwaahịa, ọrụ, ọkwa na nyocha.
8 n'ime ahịa 10 reps na-eche ọnụọgụ nke ozi ha kwesiri inyocha, na-eme ka ha nwekwuo oge hazie na nyochaa ihe omuma. Ikike ịzaghachi ma meghachi omume na mkpa nke atụmanya ahụ dị mkpa karịa mgbe ọ bụla… na mkpa ịzụ ahịa iji mee ka ikike ahịa nwee ike na ụlọ ọrụ ka ndị nnọchi anya ahịa wee nwee ike ịnye ọdịnaya ziri ezi na izipu ozi zuru oke ozugbo achọrọ ma ọ bụ rịọ ya.